FITAZOMANA NY BORIKY / AMPONDRA / BURRO TOY NY BIBY FIOMPY - ALIKA
Ilay Burro sy Mule
Anarana siantifika: Perissodactyla Equidae Equus asinus
Mainty, mainty misy lakroa (loko miavaka manamarika ny fihazakazaka eo ambonin'ny hazondamosina ampitan'ny tsipika hafa miampita ny malazo), volontany (maivana, salantsalany ary mainty), volondavenona, mena (misy sorrel, russet, roan mena, ' mavokely '), misy pentina (na' pinto 'misy loko fototra) sy fotsy.
Ny teny hoe 'boriky' any Etazonia dia matetika miresaka momba ny biby fiompy, ary ny teny hoe 'burro' dia manondro ilay kinova tsy misy alamina. Ny ampondra sy ny burros dia anarana roa mitovy amin'ilay biby. Na izany aza, any amin'ny faritra andrefan'i Etazonia, ny boriky kely indraindray dia antsoina hoe burro. Ny teny hoe burro dia anarana espaniola fotsiny ho an'ny ampondra. Ny boriky keliky kelin'i Afrika Avaratra dia razamben'ny burro Espaniôla, izay tonga niaraka tamin'ny mpandresy tany Mexico sy Amerika Atsimo. Ireo biby ireo taty aoriana dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fametrahana ny Andrefanay Andrefana. Ny teny anglisy 'burro' dia avy amin'ny teny espaniola 'borrico', izay midika hoe boriky.
Ny fisafotofotoana betsaka dia mifandraika amin'ny terminology ampondra. Ireto misy teny vitsivitsy hanampiana:
Ampondra: Miampita eo anelanelan'ny ampondra sy soavaly vavy
Ampondra soavaly: ampondra lahy
Hinny: Miampita eo anelanelan'ny boriky vavy sy ny soavaly lahy
Jack: boriky lahy
Jennet: ampondra vavy
Mole ampondra: ampondra vavy
Hinny soavaly: Lehilahy lahy
Mare hinny: Hinny vavy
John: ampondra na hinny lahy
Molly: ampondra vavy na hinny
Burro: Mitovy amin'ny ampondra nefa matetika antsoina hoe boriky kely
Ampondra kely: karazana ampondra kely kokoa
Fifanarahana amin'ny boriky kely, kely ary lehibe
Na inona na inona ampondra ho an'ny fiompiana, fampisehoana na tanjona kendrena, ny boriky dia tokony hanana refy mifanaraka tsara. Ny ampondra dia, ary mbola miasa, biby miasa amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Ny fampitoviana ny ampondra dia tsy maintsy an'ny biby miasa.
Ny lohany dia tokony ho fohy fa tsy lava loatra, fa raha oharina amin'ny biby sisa. Mombamomba mahitsy na somary nariana. Maso lehibe, malefaka ny endriny, ambany sy misokatra ary mazava. Nostrils miendrika endrika tsara sy misokatra. Tsara ny nify nefa tsy misy valanoranom-boromailala na valanoranomavo. Vavana malala-tanana, boribory ary misokatra. Mandehana mankamin'ny valanoranom-boaloboka, manaparitaka vava kely. Ravina lava, madio voadidy, atsangana, entina mafy ary mailo. Ny fisehoan'ny tanjaka sy ny maha-lehilahy amin'ny jacks sy ny vehivavy amin'ny jennys.
Ny vozony dia tokony ampifanarahana tsara amin'ny ambin'ny biby, ampidirina amin'ny loha sy ny soroka tsara sy milamina. Ny tampon'ny tendany dia tokony ho mahitsy, tsy vozon'ondry, na latsaka amin'ny sisiny na matavy be loatra. Vozona mafy, marefo ary matanjaka. Fohy sy mahitsy matetika ny mane, saingy mety hianjera amin'ny sisiny toy ny an'ny soavaly soavaly.
Ny malazan'ny boriky dia tokony tsy hisy mihitsy, fa raha tsikaritra ho tsara kokoa. Somary mitongilana ny soroka, na dia mahitsy kokoa noho ny soavaly aza. Ny taolan-tehezana dia tokony hipoitra tsara amin'ny kofehy lalina. Tratra somary malalaka ny tratra, tsy tery. Miverina fohy sy haavony, na atsoboka kely raha ny an'ny biby antitra na ny jennys foal. Ny lava, tsy misy proporsiôna aoriana dia tsy faniry. Ny valahana dia tokony ho mafy, malalaka ary mifamatotra mafy. Ny halavany dia lava sy malalaka ary fisaka araka izay azo atao. Tokony haverina tsara miaraka amin'ny halavany be eo anelanelan'ny tendrony sy ny tendro. Rehefa jerena avy any aoriana dia matevina kokoa ny faritra rehetra amin'ny efamira sy ny feny. Ny tampon'ny croup dia boribory, tsy dia mitongilana. Voafaritra tsara, tsy ambany, rakotra volo fohy ary volo lava lava no fenoina.
Ny ranga dia tsy maintsy mahitsy sy marina, miaraka amin'ny taolana sahaza azy mifanaraka amin'ny karazana biby. Mandohalika sy malalaka ny taolana, fohy ny taolana tafondro. Hock dia nametraka endrika ambany, matanjaka, madio ary marina. Ny toetra tiana amin'ny tongotry ny soavaly dia faniry ihany koa ao amin'ny ampondra, raha tsy hoe ny pasterns an'ny ampondra no mahitsy kokoa.
Houces dia tokony ho izy, amin'ny endriny tsara ary voaravaka tsara. Tokony ho mafy, madio, malama, lasitike ary henjana izy ireo. Ny habeny dia tsy maintsy ho ampy amin'ny ampondra, fa marina kosa amin'ny ho an'ny boriky mahazatra izay tery. Tsy misy fironana amin'ny kiraro ambany. Boribory somary lavalava ny tongotra eo anoloana, tongotra somary lavalava kokoa ary sahona kely nefa mandroso tsara.
Ny hetsik'izy ireo dia tokony ho salama sy marina, vonona ary mavitrika.
Mifanohitra amin'ny eritreritra malaza ny ampondra dia TSY biby maditra. Tena manan-tsaina sy mitandrina izy ireo. Mitandrina izy ireo amin'ny traikefa sy tontolo iainana vaovao ary hijanona haka izay rehetra manodidina azy ireo alohan'ny handehanany. Mitandrina izy ireo mandinika ny manodidina azy ireo (izany hoe, biby fiompy hafa, biby fiompy, tany) alohan'ny hanatanterahana asa iray. Mety eto no mipoitra ny fiheveran-diso momba ny ditra. Mila fiarahana ny ampondra, ary avela irery, mora kivy izy ireo. Raha mieritreritra boriky ianao, dia azonao atao ny mieritreritra ny hahazo roa. Ny biby hafa, toy ny ondry, osy, na soavaly, dia ampy, fa ny boriky kosa faly indrindra miaraka amina burros hafa. Tadidio fa burros / boriky sasany dia ampiasaina ho biby mpiambina. Midika izany fa miaro ny andian'ny barnyard amin'ny biby mpiremby izy ireo, izany hoe alika, coyote, sns. Ataovy ao an-tsaina izany, satria ny boriky / burros dia tsy naman'ny alika. Na dia ny sasany aza ho faly amin'ny sakaizan'ny kanelina raha tezaina miaraka hatramin'ny fahazazany izy ireo, ary mety ho lasa mifanakaiky.
Ampondra kely: ambany 36 santimetatra ny halavany rehefa malazo rehefa matotra
Ampondra kely mahazatra: hatramin'ny 36.01 ka hatramin'ny 48 santimetatra
Ampondra lehibe: mihoatra ny 48 santimetatra ary ambanin'ny 54 santimetatra ho an'ny jenny mihoatra ny 48 santimetatra ary ambanin'ny 56 santimetatra ho an'ny jacks sy hidina
Mammoth: 54 santimetatra na mihoatra an'ny jenny, 56 santimetatra na mihoatra ho an'ny jacks sy vy
Ny jack dia lahy tsy miorim-paka (afaka miteraka) ny gelding dia lahy raikitra (tsy afaka miteraka)
Ny ampondra / burros / mules dia somary mampientam-po tokoa ary mahazaka ny fiainana antonony indrindra. Ny fikarakarana ny borikinao dia tokony hampidirina amin'ny fiankinan-doha na fialofana hialana amin'izy ireo amin'ny andro ratsy. Aleon'izy ireo manana ny faritra misy azy ao anaty tranom-bahiny maizina mba hialana amin'ny hafanana amin'ny fahavaratra ary lavitra ny lalitra. Ny lalitra amin'ny fahavaratra dia tena mampahory ny ampondra, indrindra rehefa ahitra amin'ny omby. Azonao atao ny mampiasa tsifotra manidina natao ho an'ny soavaly mba tsy hanidinan'ny lalitra azy.
Amin'ny ririnina, ity fialofana ity dia manampy amin'ny fitazonana ny borikinao ho maina. Ny palitao lena dia tsy faniry indrindra amin'ny ampondrao / burro / ampondrao ary mety hahatonga ny biby fiompinao harary. Ny fanomezana fidirana amin'ny toeram-pialofana dia hanampy amin'ny fitazonana ny biby fiompinao salama salama.
Ny borikinao / burro / ampondrao dia mila fefy amin'ny faritra misy kijana telo hektara farafahakeliny. Isaky ny isa isa isaky ny ampondra fanampiny. Ataovy ao an-tsaina ny toetran'ilay tany. Raha tsy dia tsara ny fihinananao ny kijana dia mila mameno ny sakafon'ny biby ianao araka ny voalaza etsy ambony.
Manodidina ny roa andro dia mety mila manongotra (manadio) ny fivarotan-dry burro ianao na mihinana mahia.
Ny fisotroan-toaka be loatra, sy ny voka-dratsiny, dia olana ara-pahasalamana voalohany ao burro. Burros dia niainga tany an'efitra Afrika Avaratra ary niroborobo tany an'efitra Southwestern. Satria zatra tontolo iainana any an'efitra ny burros, dia tsy zakan'izy ireo ny sakafo manankarena. Ny famoahana burro tafahoatra dia miteraka fiterahana, mpanorina, colic, ary / na fery mafy amin'ny hoditra indraindray izay antsoina hoe 'fanapoizinana proteinina.' Manantona dokotera amin'ny tranga misy amin'ireto tranga ireto satria mahafaty izany.
Ny fikarakarana hoof tsy tapaka dia tena zava-dehibe amin'ny burro anao. Raha tsy mikarakara tsara ny tongotra ny biby fiompinao dia mety ho tonga mandringa izy ary hijaly tsy misy antony. Ny burros dia nitazona ny volon'izy ireo tamin'ny toe-javatra tsara tamin'ny fivelomana maherin'ny 20 kilaometatra na iray andro tany amin'ny tany karankaina. Ny burro 'pet' dia tsy afaka mitazona hoof tsara raha mandehandeha manodidina ny kijana na vala ianao. Tsy maintsy karakarainao ny volony amin'ny alàlan'ny fanamboarana azy ireo isaky ny 6 ka hatramin'ny 8 herinandro amin'ny alàlan'ny mpamaky fiara malaza. Burros dia mijanona eo amin'ny rantsan-tongony mihoatra ny soavaly. Rehefa manapaka ny kitron'ireo burro anao dia tokony haingoina ho voajanahary ho an'ny burro izy ireo (eo ho eo amin'ny 60-65 degre ny zoro hoof). Aza hadino koa fa manana toerana maina hijoroana ny burro anao satria mora voan'ny abscesses ny tongony ary misy tsipika fotsy izay mitranga amin'ny faritra mando.
Raha mahatsikaritra ny borikinao / burro manana sakafo niraikitra amin'ny nifiny na olana amin'ny fitsakoana dia tokony hoheverinao ny hijerena azy ireo. Ny nifinao burro / borikinao dia mila fikarakarana sahaza. Ny nifin'ny biby dia tokony hojerena isan-taona. Ny nifin'izy ireo dia mitombo tsy tapaka mandritra ny androm-piainany ary reraka tsy mihinan-kanina. Raha mitafy sisiny na teboka maranitra izy ireo ka miteraka fanaintainana sy misoroka azy tsy hitsakoana ny sakafony. Ny mpitsabo anao dia afaka mametraka ireo toerana tsy mitombina ireo raha ilaina amin'ny alàlan'ny fomba antsoina hoe mitsingevana.
Ataovy vaksiny isan-taona ny burro / ampondravavinao toy ny fanaon'ny soavaly matoa tratran'ny aretina mitovy ny burro anao. Miresaha amin'ny mpitsabo biby anao momba ny fanoloran-tena voatanisa sy ny fe-potoana.
Ilaina koa ny de-worming amin'ny fikarakarana burro. Miresaha amin'ny mpitsabo biby anao amin'ny fandaharam-potoana voatondro de-worming. Ny sasany amin'ireo dokotera mpitsabo dia manolotra ny de-worming isaky ny 3 volana. Ireo karazana de-wormers mitovy amin'ny an'ny soavaly dia azo ampiasaina amin'ny burros ao an-tsaina fa ny burros dia mety milanja kely kokoa noho izany ny fatra tokony hovaina mifanaraka amin'izany.
Ny holatra, ny kosy ary ny katsentsitra dia mety hameno ny palitaon'ny ampondravavinao raha tsy karakaraina tsara izy io, koa fantaro tsara ireo olana mety hitranga ireo ary karakarao mifanaraka amin'izany. Ny miborosy no aleony mandro satria aleon'ny burros / ampondra tsy ho lena.
Mba hanampiana ny burro hamakivaky tsara ny ririnina dia omeo rano tsy be dia be izy, ahitra tsara, fialofana ary toerana maina hatory. Ny sasany dia manolo-kevitra ny fikosohan-doha ny palitao mba hampisondrotra azy, satria ny volo mikitroka dia mamandrika ny rivotra hiasa ho toy ny sosona insulation ary hanafana azy. Ny sasany kosa milaza fa fomba fanao ratsy ity ary mety hanala ilay sosona fisorohana.
Ny ampondra dia hisakafo eo amin'ny kijana ahitany ahitra sy zava-maniry hohanina. Ny ampondra izay ampidirina amin'ny kijana ahitra dia mila kely, raha misy ahitra fanampiny, raha betsaka ny ahitra sy ny zavamaniry hafa. Aza hadino ny manara-maso ny lanjan'izy ireo mba hahazoana antoka fa tsy matavy loatra izy ireo. Mety tsy maintsy fehezinao ny fotoanan'izy ireo.
Fampahalalana ankapobeny momba ny famahanana ny biby fiompinao: Ny mpitaingin-tsoavaly rehetra dia mora tohina amin'ny poizina izay hita ao anaty fahana simba, noho izany ny feed rehetra dia tokony ho afaka amin'ny bobongolo. Ny fanovana rehetra amin'ny sakafo dia tokony hatao tsikelikely hisorohana ny fikorontanan'ny colic sy ny digestion. Ny ampondra dia aleony mizaha ny habetsaky ny vodiny sy ny fibre mandritra ny tontolo andro ary aleony mihinana kely sy matetika. Na dia mety ho tianao aza ny borikinao dia aza tia azy (velomy) ho faty! Aza misakafo be loatra amin'ny borikinao-jereo ny toetoetran'ny ampondranao matetika, satria manimba ny fahasalaman'ny ampondranao ny fihinanan-kanina. Ny boriky dia tsy mila siramamy avo lenta amin'ny sakafony. Omeo foana ny lick mineraly sy ny fidirana maharitra amin'ny famatsian-drano madio (sy tsy maharitra).
Misy: Raha tsinjovinao ny famahanana ahitra amin'ny borikinao / burro mandritra ny ririnina dia mila jerena ny karazan'ahitra novidinao sy ny taona nanapahana azy. Ny kalitaon'ny ahonao dia hanisy fahasamihafana miavaka amin'ny fepetra takiana / famenon-tsakafon'ny biby fiompinao.
Ny ahitra Meadow dia mifangaro ahitra maniry amin'ny kijana taloha ary tsara hohanina amin'ny ampondra. Tsarovy fa ny ahitra voatapaka farany dia hanana soatoavin'ny angovo ambany. Raha mividy ahitra amin'ny tantsaha iray ao an-toerana ianao dia tadidio ny toetranao eo an-toerana (toetr'andro orana, haintany) fehezo ny vanim-potoana famaranana (faran'ny volana Mey hatramin'ny tapaky ny volana Jona). Ny fividianana ahitra eo an-toerana dia manome tombony anao amin'ny fahalalana ny sandan'ny fividiananao. Raha ny fahatapahana dia amin'ny faramparan'ny taona dia maro ny sanda mahavelona no hivoaka avy amin'ny ahitra ary ny ahitra sasany dia ho lasa voa. Ity karazana ahitra ity dia ambany lavitra noho ny lanjan'ny angovo noho ny ahitra notapahina aloha ary noho izany antony izany dia tsara ny misakafo amin'ny ampondra. Ity hay 'tapahina faharoa' ity dia mazàna ambany kokoa amin'ny sandan'ny angovo ary tsara ho an'ny ampondra indray.
Mba hampihenana ny mety hisian'ny colic sy laminitis dia afangaro ny ahitra vaovao amin'ny ahitra tamin'ny taona lasa na tamin'ny mololo nandritra ny andro vitsivitsy. Manaova fiovana miandalana amin'ny famahanana. Ny ahitra voapaika rehetra dia tokony tahirizina ao amin'ny trano fitahirizana maina mandritra ny roa volana eo ho eo alohan'ny hamahanana azy amin'ny biby fiompinao.
Mineraly sy vitamina: Manoro hevitra ny borikinao / burro hanana fidirana malalaka amin'ny sakana mineraly misy mineraly, izay misy mineraly isan-karazany ao anatin'izany ny sira, ho famenon-tsakafo. Ny boriky dia mahazo vitamina sy mineraly marobe avy amin'ny mololo, ahitra ary ahitra amin'ny sakafony. Ny sakana natao ho an'ny biby fiompy hafa dia mety hampidi-doza ho an'ny ampondra satria ny sasany misy haavon'ny mineraly tsy mendrika. Azafady mba jereo ny marika alohan'ny hividianana sy hanomezana sakafo.
Straw: Ny ahitra ahitra tsy dia misy kalitao dia azo ampitahaina amin'ny soatoavina famahanana toy ny mololo orza misy kalitao tsara. Raha tsy izany, ny mololo oat dia azo omena ity izay mazàna manana lanja ara-tsakafo kely kokoa noho ny mololo. Ny mololo dia somary marefo saingy manana soatoavina ambany amin'ny sakafo. Misy poizina ny mololo vita amin'ny rongony ary tokony hialana.
Ahitra sy hatsiaka ahitra maina: Ny akofa dia fifangaroan'ny ahitra sy mololo voatetika ary misy karazany maro ny akofa eny an-tsena. Mifandraisa amin'ny magazay fivarotana / varimbazaha eo an-toerana raha misy sakafo ilaina amin'ny sakafo.
Pulp vita amin'ny siramamy maina: Ny siramamy siramamy dia tsy afaka manolo ny ahidrano na ny iray amin'ireo solony, fa loharano ilaina amin'ny fibre mahavokatra sy mahavelona izy raha ampiana amin'ny sakafo. Raha marary ny ampondranao dia mety tsara koa ny mitadidy an'io mba hihinanany.
Haylage: Haylage dia ahitra somary maina izay navela ho maina hatramin'ny 55-65% (raha ampitahaina amin'ny 85% amin'ny ahitra). Haylage dia voahosotra, voafintina ary banga voaisy tombo-kase ao anaty harona plastika mavesatra ary tena azo sotroina sy mahavelona.
Succulents: Ny turnips sy ny karaoty dia mandrisika ny fahazotoan-komana ary fanampiana mendrika ny sakafo ara-dalàna amin'ny ririnina sy ny fiandohan'ny lohataona raha tsy misy ahitra vaovao. Aza manome sakafo ny voly fakany izay niharan'ny fanala, na ovy maitso satria mety misy mould sy poizina misy poizina amin'ny burro / ampondranao ireo.
Rano: Ny rano madio sy madio dia tokony hisy malalaka amin'ny fotoana rehetra. Aza adino ny manamarina ny famatsian-drano amin'ny toetr'andro mangatsiaka sao azo antoka fa tsy nangatsiaka izy ireo.
Mitaky fanatanjahan-tena isan'andro. Mila manana tany ampy hampiasana ny tenany izy ireo.
Ny boriky sy ny burros dia manana androm-piainan'ny 30 ka hatramin'ny 50 taona, izay lehibe kokoa noho ny an'ny soavaly. Meteza tompon'andraikitra biby tompon'andraikitra. Rehefa mieritreritra mividy misy azafady dia diniho ny androm-piainany alohan'ny fividianana.
Jennet / jenny dia hitondra foal 12 eo ho eo alohan'ny hiterahana, na izany aza, ny halavan'ny fihetseham-po dia manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny efa ho 14 volana. Koa satria lava loatra ny halavan'ny fihetseham-po, dia fahendrena ny mandinika ny fotoana an-taonany hahalasa ny jenny anao, ary hametra ny vanim-potoana fiompiana amin'ny fe-potoana Mey hatramin'ny Aogositra. Na ny lafiny iray amin'ireo daty ireo dia mitaky trano fitobiana sahaza amin'ny toetrandro mangatsiaka kokoa mba hiantohana ny fahaveloman'ny foal sy ny fahasalaman'ny jenny anao.
Ny Jenniferets / jennys dia tokony homena fiainana milamina mandritra ny fitondrana vohoka miaraka amin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka na amin'ny fahalalahana. Azo atao ny mitaingina maivana sy mitondra fiara raha zatra ny asa toy izany. Ny asa haingana sy sarotra dia tokony hialana mandra-piterahan'ny jenny. Raha tsy manify ny jenny anao dia mety mijanona tsy miova ny regimen famahanana mandra-pahatongan'ny 3 volana farany nihetsi-jaza. Io no mitombo haingana indrindra ny foetus. Ny fihinanan-kanina be loatra alohan'ny fitondrana vohoka dia hiteraka fiterahana izay mety hiteraka olana mandritra ny fiterahana. Ny fitomboan'ny habetsahan'ny sakafo dia tokony tazonina hatramin'ny telovolana farany hatramin'ny fitondrana vohoka mandra-pahatapitry ny telo volana voalohany aorian'ny nahaterahana satria ny famokarana ronono sy ny tinady betsaka indrindra dia mitranga mandritra io fotoana io.
Tsy mamokatra velively i Johns.
Rehefa ampakarina amina soavaly dia mollies iray amin'ny iray tapitrisa no fantatra fa mahavokatra.
Ny ampondra miampita ampondra hafa dia tsy mahavokatra velively.
chihuahua sy beagle mampifangaro alika kely
lavaka orona manga mifangaro amin'ny lab
fifangaroana pincher pug bitika kely amidy
alika kely toa boxer
mpiompy cur vava mainty
10 volana pitbull alika